Teknolojia marketing: Iray ihany ve ireo?
Alakamisy Janoary 28, 2010 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tokony ho a teknolojia manam-pahaizana ho mpitarika ao Marketing? Toa nivadika tao anatin'ny roapolo taona lasa ny varotra sy ny haitao.
Na ny mpanoratra kopia aza dia mila mahatakatra ny fomba famakian'ny olona pejy - manao andrana A / B, manaiky ny fampiasa fotsy, ary mijery ny sarintany hafanana. Ireo mpitantana marika dia mizara torolàlana marika misy ny sakany pixel, loko mifandraika ary teny mifandraika amin'ilay marika… nosedraina sy voaporofo tamin'ny teknolojia avokoa. Ireo mpivarotra mivantana dia tsy maintsy mahatakatra ny dokam-barotra maoderina sy marketing.
Ireto misy ohatra vitsivitsy monja, saingy mahavariana ahy fa ny filoha lefitry ny Marketing eto amin'izao tontolo izao ankehitriny dia tokony hifanaraka bebe kokoa amin'ny fahaiza-manao sy ny valiny fanehoan-kevitra azo alaina amin'ny haitao noho ny tamin'ny taona maro lasa izay.
Tsaroako ny nidirako tao amin'ny biraon'ny VP indray mandeha rehefa niasa tao amin'ny gazety aho ary hoy izy ireo, “Inona no ataon'ny mpitantana ny Database Marketing?” Efa ho 10 taona lasa izay ary gaga be aho! Amin'ny fahatsorana rehetra, dia takatr'io olona io ny fikambanan-teny, ny fanoratana kopia ary ny firafitry ny pejy… tsy misy hafa. Tsy naharitra koa izy ireo…
Na dia mitombo aza ny ankamaroan'ny orinasa ary mihombo amin'ny famaritana bebe kokoa ny asa dia nitatra ny mpitarika Marketing. Na ny fitantanana marketing amin'ny tranokala aza tsy maintsy mahatakatra fikarohana Optimization, varotra motera fikarohana, famolavolana, marika, fanavaozana fiovam-po, fanoratana kopia, A / B fitiliana, Analytics, fanaovana sarintany hafanana… Mba hanonona vitsivitsy!
Ianao ve dia mpitarika marketing tsy miankina amin'ny teknolojia? Te handre toha-kevitra vitsivitsy momba an'io aho. Tsy mino aho fa ny mpitondra marketing dia tokony hahalala ny vazivazy amin'ireo teknolojia ireo na ny fomba fampiharana azy… manana loharanon-karena amin'izany izy ireo. Na izany aza, ny fahazoana ny teknolojia dia toa ilaina ao amin'ny bokiko.
Tags: isa kloutFivarotana finday sy tabletteWordPress
Jan 28, 2010 ao amin'ny 11: 45 AM
Raha tsy mampiasa teknolojia amin'ny Marketing ianao dia ao aorianao ary very ny fahombiazany sy ny fahafaha-manao lehibe! Mba hahomby tokoa ny varotra dia MANAJAKA ny teknolojia mitovy ny mitondra valiny. Ny centsako roa….
28 Jan 2010 amin'ny 2:53 PM
Tsy hohenoinao miady hevitra amin'ny fanoherana ny fahazoana mahatakatra sy mandray teknolojia aho. Mifanohitra tanteraka amin'izany. Fepetra takiana amin'ny fahafantarana ny teknolojia ary fampiharana accretive manohitra izay rehetra ataonao amin'ny maha mpivarotra anao izany. Raha ny lohan'ny marketing sy ny lohan'ny IT dia tsy mahay miteny fiteny mitovy dia tsy ho lavitra ny fahombiazan'ny fahombiazana. .
28 Jan 2010 amin'ny 3:26 PM
Manaiky tanteraka anao, Douglas. Mark W. Schaefer dia namela ity hevitra ity tao amin'ny lahatsoratro bilaogy mitondra ny lohateny hoe "Darwinism & Media Sosial".
Androany, ny hafainganan'ny fiovana dia hamaritra firenena, vahoaka ary fahombiazan'ny isam-batan'olona. Io no fivoarana vaovao. Ny ho avy dia tsy an'ny tena mety fa an'ny tena mahay mandanjalanja, ireo izay afaka mamantatra ny fomba fampiasana fanovana teknolojia hahazoana tombony amin'ny fifaninanana ”.
Jan 29, 2010 ao amin'ny 11: 15 AM
Ireo mpivarotra dia mila mahatakatra ny fiasan'ny teknolojia manome ny hafatr'izy ireo. Fa raha ny marina dia mila mijanona amin'ny agnostika teknolojia isika: tsy manambady olona manokana, vonona hampiasa izay mampifandray antsika amin'ny misy ny mpanjifantsika ankehitriny.